Sambed Onlineखोप लगाउन होइन, खोप लगाएको प्रमाण लिन अस्पतालमै बास - Sambed Online
खोप लगाउन होइन, खोप लगाएको प्रमाण लिन अस्पतालमै बास
बिहीबार दिउँसो टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाहिर ठेलमठेल लाइन थियो । अस्पताल भित्रबाट शुरु भएको लाइन मुख्य सडकसम्म आइपुगेको थियो ।
लाइन बस्दाबस्दै एक जना युवती बेहोस पनि भइन् । राति १ बजेदेखि मध्य दिउँसोसम्म कुर्दा पनि पालो नपाएको भन्दै आक्रोशको स्वर सुनिन्थ्यो । भोकै पेट घाममा बस्दाबस्दै निराश भइसकेका कतिपय भने व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्दै नाराबाजी गरे र अस्पतालको गेट ठेल्न थाले । गेट खुलेर सबैजना भित्र छिर्न खोज्दा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गर्‍यो ।
त्यही बेला कोरोना संक्रमितलाई बोकेर एउटा एम्बुलेन्स आयो । तर अस्पतालको गेट लागाएका कारण सहजै प्रवेश पाएन । करिब १० मिनेट लगाएर प्रहरीले भिड पन्छाउदै गेट खोल्यो । एम्बुलेन्ससँगै केही मानिस पनि भित्र छिरे । धेरैलाई भने बाहिरै रोक्न प्रहरी सफल भयो ।
त्यही बेला कोरोनाको खोप लगाएको कार्ड प्रमाणीकरण गरेर निस्किएका सर्लाहीको रामु यादवले सुनाए, ‘यही जाबो एउटा कागजको खोस्टोका लागि १२ घण्टा भोकभोकै लाइन बस्नुपर्‍यो ।’
यो लाइनमा धेरैजसो विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरु छन्, जसले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । तर खोप कार्ड प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुनाले यहाँ लाइन लाग्न आएका छन् । खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि टेकु अस्पतालमात्र तोकिएकाले अत्यधिक भिड लागेको छ ।
थोरै जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने र सानो ठाउँ भएका कारण भीड व्यवस्थापन गर्न नसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् । गएका तीन/चार दिनयता खोप लगाउने, खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्ने र अन्य सेवा लिने मानिसहरुका कारण अत्यधिक भीड भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘मानिसहरु यति धेरै ओइरिए कि हामीले केही गर्नै सकेका छैनौं ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जान सबै देशमा खोप अनिवार्य छैन, तर खोप नलगाई जाँदा आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । कतारमा १४ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टिन बस्दा २५०० देखि ३६०० कतारी रियालसम्म खर्चिनुपर्छ । साउदीमा ७ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टन खर्च ८०० देखि एक हजार डलरसम्म छ । यो खर्च आफैं तिर्नु पर्ने हुनाले नेपाली सकेसम्म खोप लगाएरै जान चाहन्छन् ।
तर खोप कार्डमा उल्लेखित विवरण अंग्रेजीमा नभरेको, आधिकारिक छाप नभएको र कतिपय ठाउँमा नेपालीमा नाम लेखेको र विवरण नभरी खाली छाडेको छन्, जसले खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । भिसा तथा नागरिकताको विवरणभन्दा फरक भएको र नक्कली खोप कार्ड बनाउने सम्भावना भएकाले पनि खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्नुपरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार खोप केन्द्रहरुले भर्नुपर्ने विवरण मनपरी भरेका कारण र नक्कली खोप कार्ड बनाउने सम्भावना भएकाले अन्य देशमा नेपालको खोप कार्डले सिधै मान्यता नपाउने स्थिति छ ।
खोप प्रमाणीकरणका लागि टेकु अस्पतालबाहिर जम्मा भएको त्यही भिडमा भेटिए काभ्रेका ३१ वर्षीय दीपेन तामाङ । बिहीबार विहान साढे ३ बजे नै टेकु अस्पताल पुगेका उनी दिउँसोको १२ बज्दासम्म लाइनमै थिए । उनी भन्दा अगाडि अझै ३०० जना थिए । ‘सबै प्रकिया पूरा भइसकेको छ, अब खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्नासाथ टिकट फिक्स हुन्छ,’ उनले भने ।